Mavericks iTunes ndabere extractor: Wepụ iTunes na nkwado ndabere na Mavericks
iTunes ndabere extractor maka Mavericks: Wepụ iTunes ndabere na a Mavericks Mac
> Resource> iTunes> iTunes ndabere extractor maka Mavericks: Wepụ iTunes ndabere na a Mavericks Mac
Ebee bụ iTunes ndabere faịlụ emi odude ke Mac OS X Mavericks (10.9)?
Ò kwalite gị Mac ka ọhụrụ Mavericks? Ọ dịghị mkpa, ị ka nwere ike ịchọta iTunes ndabere na faịlụ a:
/ Ọrụ / aha njirimara / Library / Ngwa Nkwado / MobileSync / ndabere /
Cheta na: Dochie aha njirimara dị ka aha gị Mac n'ebe ahụ.
Anyị pụrụ ozugbo-ele data na iTunes na nkwado ndabere na Mavericks?
Azịza ya bụ ee, ọbụna nke a Kacha ọhụrụ Mavericks usoro. O yiri ka Apple agaghị agbanwe ya n'uche ka iTunes ndabere faịlụ na-ogugu na kọmputa gị. Iji nweta ya, ị mkpa ịdabere na a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ dị ka iTunes ndabere extractor maka Mavericks. Nke a na ụdị ngwá ọrụ ka i nwee ike wepụ ọdịnaya niile dị na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ maka ịgụ na kọmputa gị.
Olee otú anyị pụrụ wepụ iTunes ndabere faịlụ na Mavericks
Ná mmalite, na-Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac) ibudatara na arụnyere na gị na Mac. The ikpe mbipute n'okpuru bụ maka free. Mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ wepụ iTunes ndabere ugbu a.
Nzọụkwụ 1. Họrọ iTunes ndabere maka gị iPhone ma wepụ ya
Mgbe ị na-agba ọsọ a iTunes ndabere extractor maka Mavericks na kọmputa gị, ị ga-ahụ abụọ mgbake ụdịdị n'elu nke ya isi window. Ime ka naputa site na iTunes ndabere File mode, na mgbe ahụ ị ga-ahụ na windo n'okpuru. E niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị na-achọta na-egosipụta na a ndepụta. Ugbu a gị na mkpa ịhọrọ otu maka gị iPhone na pịa na Malite iṅomi button ịga n'ihu.
Nzọụkwụ 2. ịhụchalụ iTunes ndabere ọdịnaya
Mgbe scanning, ị ga-enweta a Doppler N'ihi dị ka e gosiri na window n'okpuru. Ịnwere ike ihuchalu nkọwa nile nke ndabere faịlụ, dị ka photos, videos, kọntaktị, ozi, ndetu, akpọ akụkọ ihe mere na na. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta ha gị na kọmputa, ị nwere ike họrọ ihe na pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na otu Pịa.
Cheta na: Ọ bụghị nanị na ẹdude data na iTunes ndabere, a Mavericks iTunes ndabere extractor nwekwara ike chọta ehichapụ data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, dị ka ogologo oge ha na-adịghị overwritten. Ị nwere ike ịlele ha na oroma ihe.
N'ebemkpofuozi Mavericks Iweghachite: Naghachi Data si Mkpofu na Mavericks
Olee otú Naghachi ehichapụ Data na Mavericks (Mac OS X 10.9)
7 Bara Uru iTunes ndabere Atụmatụ ị kwesịrị ị na Miss
Na-eme iTunes ndabere Photos?
All ụzọ zọpụta / ndabere iTunes Gị Library
Esi ọcha Up iTunes Library
Olee otú Ọkụ iTunes Radio na CD
Otú ịgbanwe EPUB Cover site iTunes